Ndị na -emepụta Doosan | Ndị na -eweta China Doosan & Ụlọ ọrụ
K9005347 DH130-5 Long SYL excavator bọketTooth maka Doosan
DH130-5 K9005347 Ogologo eze SYL maka ihe mkpuchi Doosan, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo oge, ntụkwasị obi ka mma. Aili rụpụtara ya afọ 40, na-atụ anya ịbụ ezigbo onye mmekọ gị.
2713-9038 DH280 excavator bọket denta sitere na nrụpụta Aili
2713-9038 ezé ịwa excavator, ihe nchara alloy, ịdị mma, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma. Aili tinyere onwe ya na mpaghara Spare parts Casting and Forging area 40 afọ. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-anọ ogologo oge na China.
2713-1219 S290-5 excavator ịwụ ezé nwere akwụkwọ ikike
2713-1219 excavator bọket ezé maka ihe mkpuchi Doosan S290-5 nwere ụdị dị iche iche, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma.
Nkọwa: Daewoo/Doosan DH220 Excavator akụkụ nchekwa, 2713-1219, ebe ezé ịwụ.
2713-1217 2713-9041 DH220-5 ezé ịwụ excavator
2713-1217 2713-9041 DH220-5 ezé ịwụ excavator, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma. Aili tinyere onwe ya na mpaghara Spare parts Casting and Forging area 40 afọ. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-anọ ogologo oge na China.
713-00057RC DH130-5 DX140 ndụmọdụ ịwụ excavator
713-00057RC DH130-5 DX 140 ndụmọdụ ịwụ excavator, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo oge, ntụkwasị obi ka mma.Aili rụpụtara ya afọ 40, na-atụ anya ịbụ ezigbo onye mmekọ gị.
713-00032RC 2713-1234TL DH360-5 ezé ịwa excavator maka Doosan
713-00032RC DH360-5 excavator ịwụ ezé maka Doosan, alloy steel material, anụ kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma.Aili rụpụtara ya na afọ 40, na-atụ anya ka ị bụrụ ezigbo onye mmekọ gị.
Dochie ezé ịwụ ịwụ elu 18S maka Esco DH55
18S top pin eze (WS55/DH55) nnọchi Construction ịwụ Ezé maka excavator na ụdị dị iche iche, alloy ígwè ihe, mma mma, ogologo na -eyi ndụ, mma pụrụ ịdabere na.
DH130-5 Ihe nkwụnye ịwụ kwụ ọtọ 713-00058 nwere oghere 30mm
DH130-5 713-00058 ihe nkwụnye bọket maka Doosan excavator.alloy steel steel, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo oge, ntụkwasị obi ka mma.